Izindlu ezi-Luxury Six Palms #5. I-Playa Encanto - I-Airbnb
Izindlu ezi-Luxury Six Palms #5. I-Playa Encanto
Playa Encanto, Sonora, i-Mexico
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Valeriy
I-villa entsha eyakhelwe ehlobo lika-2020 e-Playa Encanto, amabhishi anesihlabathi angapheli, amanzi angenawo ama-aqua blue rock. Imizuzu eyi-15 kude nezindawo zokudlela, izitolo, imigoqo yedolobha.
Izwa ulwandle ngendlela ongakaze uyibone ngaphambili, umkhathi ocezile, ukuphuma nokushona kwelanga okumangalisayo, kanye nemibono emangalisayo yolwandle lwaseCortez.
Indawo ifinyelela echibini, iJacuzzi, ulwandle, ama-palapas, nazo zonke izinsiza zangaphandle zeSix Palms Villas.
I-Luxurious 1,380 SF yegumbi lokulala elihle kakhulu le-2, i-villa yokugezela engu-2 ebanzi enentofontofo engenakuqhathaniswa, ipulani eliphansi lesimanje elivulekile, elinokubukwa kolwandle.
Lokhu kubhuka kukunikeza ukufinyelela kumbhede owodwa emi-2, iyunithi yokugezela engu-2 ekwazi ukufinyelela nje izinyathelo zokuya kuzo zonke izinsiza zangaphandle ezihlanganisa ichibi, i-Jacuzzi, i-palapas, nolwandle lwe-Six Palms Villas futhi yabelwa ezinye izindlu ezi-4 ezingaphambili zolwandle.
Iphuli Yabantu Abadala - Ukugeza ilanga eduze kwechibi elihlanzekile elingapheli futhi ujabulele umoya ohelezayo wolwandle.
I-Kiddie Pool - Izingane zingachaphazeka futhi zizijabulise usuku lonke echibini elijulile elingu-2-3 FT eliphephile.
I-Jacuzzi - I-Jacuzzi enkulu yabantu abayi-12 ilungele imibuthano nezindaba ezingapheli.
Indawo yokuphuzela utshwala ihlanganisa indawo yokubeka iwayini kanye netafula lokudlela elikhulu labantu abangu-6 ngaphezu kwesiqhingi sasekhishini labantu abangu-3.
Igumbi lokuhlala: Indawo yokuhlala evulekile enosofa omkhulu wabantu abangafika kwabangu-7 kanye ne-TV engu-75 inch yokuzijabulisa kwakho.
Igumbi lokulala lezivakashi lokuqala: 2 umbhede omkhulukazi kanye ne-TV engama-intshi angu-55.
Igumbi lokulala elikhulu: umbhede ongusayizi wenkosi ongu-1, i-TV eyi-intshi engama-75, nendlu yokugezela yangasese.
Hlola ezinye izinketho ezise- Playa Encanto namaphethelo